Ingabe Umsebenzi wakho Uyakusebenzela? Bangaki Abasebenzi? | Martech Zone
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ubungeke ungibambe etafuleni lami kuze kube yi-9AM noma kamuva. Akukona ukuthi ngisebenze sekwephuzile… ukuthi umsebenzi wami ubusebenza kimi ukwedlula indlela ebengisebenza ngayo. Kungenzeka impela, bekungumsebenzi omuhle umuntu angathola lapha maphakathi nentshonalanga. Embonini yesoftware, ngingabaphonsela inselelo abantu ukuze bathole okungcono. NgangiyiMenenja yoMkhiqizo nenye yezinkampani ezikhula ngesivinini esikhulu - hhayi esifundeni kuphela - kodwa ezweni. Ukukhula okusheshayo kuletha inselelo enkulu ngakho, noma kunjalo.
Ngivela kusizinda Sokukhiqiza, umbono wami omningi womsebenzi wanamuhla usabuyela kumnyombo wami wobunjiniyela. Umkhiqizo waklanywa, wakhiwa, wathengiswa futhi wasekelwa. Akuve ilula… uze uqale ukukhula ngesilinganiso esisheshayo. Esikhundleni sokuqala umugqa omusha womhlangano, uqhubeka ungeza abantu kuwo. Cabanga nje ngenja yesihlibhi edonsa isleigh. Faka izinja ezimbalwa futhi nabagibeli abambalwa futhi manje udinga i-musher enkulu kanye nomholi wezinja. Faka okuningi kakhulu, noma kunjalo, futhi izinja azazi ukuthi iyiphi inkambiso okufanele ihanjiswe futhi i-musher ilahlekile kwenye indawo ekuxubeni.
Isimanga, yiqiniso, ukuthi ukukhula okukhulu kungenye yezimpawu eziyinhloko zokuphumelela kwebhizinisi. Angishayi nakancane ibhizinisi elikhulu - ngiyangqongqoza nje ukusebenza ebhizinisini elikhulu. Ngoguquko lwami lokugcina, sengisukile enkampanini yabangaphezu kuka-200 ngaya enkampanini yabangu-5.
Emsebenzini wami omusha, kungenzeka ukuthi umsebenzi uphindwe kabili noma kathathu kunabantu. Umehluko akekho olinde omunye umuntu, noma kunjalo… sonke sigijima ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka ukukhipha umsebenzi. Akekho ocasukile, akekho omemezayo… sonke siyasizana ukuhambisa umkhiqizo namakhasimende ethu phambili. Amanye amaklayenti ethu makhulu ngendlela emangalisayo, kepha ayathethelela kakhulu inqobo nje uma sigcina ukuxhumana nawo futhi siwazisa intuthuko yethu.
Last isonto Ngafaka uhlelo lwefoni lwe-PBX, inethiwekhi, inethiwekhi engenantambo, yakha incwajana yethu yokuqala, ngathumela umkhankaso wethu wokuqala, ngabhala izidingo zezithuthukisi eziningana ohlelweni lwethu lwamaqembu amabili konjiniyela, esisebenzele ukusenza singavinjelwa nabaphathi be-AOL, Ihhovisi lisuka ezindaweni zethu ezindala liye ezindaweni ezintsha, lisizile ukusebenzisa amaklayenti ambalwa amasha, kanti sonke lesi sikhathi bekusetshenzelwa ngaso inkampani yocingo izinkinga.
Lokho kungaba ngaphezu kwalokho engikutholile ngonyaka odlule enkampanini enkulu! Iphuzu lami lapha akukhona ukungqongqoza inkampani ebengiyisebenzela - ngiseyikhasimende futhi ngingabancoma njengabaphambili embonini, bar none. Iphuzu lami kuphela ukuletha ukunakekelwa kweqiniso lokuthi amaqembu amancane, azimele angahamba ngejubane lombani. Uma ufuna ukubona inqubekela phambili, bese ususa i-bureaucracy bese unika amandla abasebenzi bakho ukuthi baphumelele.
Isibonelo esisodwa engisifunde eminyakeni eminingi edlule besimayelana WL Gore, inkampani eyasungula I-Gore-tex.
E-Gore ubizwe phakathi kwezinkampani eziyi-100 ezihamba phambili ezisebenzelwa iMelika, ngumagazini i-FORTUNE, futhi isiko lethu liyisibonelo sezinhlangano zesimanje ezifuna ukukhula ngokuvula ubuciko kanye nokukhuthaza ukusebenza ngokubambisana.
Abaholi baseGore bathole ukukhulisa indawo engaphezu kwenani elithile labasebenzi kunciphise ubuhlakani futhi banciphisa ukukhiqiza okuphelele. Esikhundleni sokukhulisa inkampani, uGore angavele aqale inkampani 'entsha', abonise imigqa yomkhiqizo nohlaka lwenhlangano yendawo ngayinye. Manje banabasebenzi abangaphezu kuka-8,000 ezindaweni ezingama-45. Uma wenza izibalo, lokho kungabasebenzi abayi-177 endaweni ngayinye - isibalo sabasebenzi esilawulekayo kakhulu.
Isoftware namuhla iboleka kulesi sakhiwo. Akunasidingo sokuba neqembu elikhulu lezentuthuko elizikhubekisayo ukuze lithuthukise uhlelo lokusebenza oluningi ngezimbungulu ezifihlwe ngokujulile nezendlalelo nezendlalelo zobunzima. Esikhundleni salokho, SOA kukhuthaza amaqembu amancane, azimele. Ithimba ngalinye lingakha izixazululo eziyinkimbinkimbi… okuvamile kuphela ukuthi izingxenye zohlelo zikhuluma kanjani.
Impilo imnandi emncane wethu inkampani. Sithatha imali yokutshala imali njengamanje (zizwe ukhululekile ngithinte uma ungumtshali-zimali omkhulu) futhi imboni ivulekile kakhulu. Abanye bangahle bangavumelani, kepha angikholwa ukuthi sinomncintiswano oyedwa, onekhono. Sihlangene futhi sihlanganiswe nezixazululo ezinhle kakhulu embonini… ukusebenzisa i-imeyili, i-SMS, i-Voiceshot, ifeksi, iwebhu kanye pOS ubuchwepheshe bokukhulisa ukuzibandakanya nenzuzo embonini yokudlela.
Ngenhlanhla, sinciphile, sikhohlakele, futhi sihamba ngesivinini esimangazayo. Senze ubudlelwano nezinkampani ezihlonishwa kakhulu ezimbonini zeRestaurant, Web, Search and Marketing. Imboni ngeyethu ukuba siyithathe futhi sinecebo nobuholi bokuyenza. Futhi asihleleli ukuqasha nganoma yisiphi isikhathi kungekudala.
Namuhla, ngisebenza umsebenzi wami - ngingawuvumeli ungisebenze. Ngisehhovisi ngo-8AM futhi ngisebenza amahora amahle ayi-10 kuye kwangama-20 ngesonto ukwedlula engangikwenza ngonyaka owedlule. Ngoba ngithola inani elichazayo lomsebenzi owenziwayo, ngijabule futhi ikhiqize. Ngiyethemba ukuthi ngeke sifike kubasebenzi abayi-177 noma nini maduzane… ngaphandle uma sinquma ukukhipha indawo entsha!
Tags: isigaba sabasebenziInhlanganoIsakhiwo senhlanganoUkwakheka
Sep 10, 2007 ku-9: 52 AM
Indatshana enhle. Ngicabanga ngalokhu kaningi ngoba ngisebenza enkampanini enkulu, kepha ngesikhathi sami sokuphumula ngisebenzisa isiqalo esincane sewebhu kanye ne-blog embalwa. Ukuphathwa Kwedatha yilokho engikwenza nsuku zonke, kepha ngiyazithanda iziqalo ngoba uthola ukunambitheka kwazo zonke izingxenye zebhizinisi.
Sep 10, 2007 ku-9: 53 AM
Ngivele ngabona ukuthi ngibhodle i-URL yami….